The Lobby - Myanmar News
မမဆောင်းက ဝယ်သလိုလို မဝယ်သလိုလိုနဲ့ တစ်ကယ်အားပေးသွားကြောင်း ပြောလာတဲ့ အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်း
In: Editor Choice
မင်္ဂလာပါ ချစ်ကပရိတ်သတ်တို့ရေ အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်းကတော့ အသံပါဝါ ကောင်းကောင်း နဲ့ သီချင်းတွေ သီဆိုပြီး ပရိတ်သတ်များစွာရဲ့ အချစ်ကိုခံယူထားတဲ့ တေးသံရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ။ အဆိုတော် ဗီဗာဟိန်းဟာ ဆိတ်တုံးကြော် ၊ ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ် ၊ ဆတ်မွှကြော် ၊ မန်ကျည်းသီး ပုစွန်ခြောက်ကြော် စတာလေးတွေကို ရောင်းချပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်အဆိုတော်ဗီဗာဟိန်းဆီက မမဆောင်းက ဝယ်ယူအားပေးသွားတဲ့အတွက် မမဆောင်းက၀ယ်သလို မ၀ယ်သလိုလိုနဲ့ အခုတော့ တကယ်အားပေးသွားကြောင်းအခုလိုပြောလာခဲ့ပါတယ်နော်။ အဆိုတော်ဗီဗာဟိန်းက “မမဆောင်းကလဲဝယ်သလိုမဝယ်သလိုလိုနဲ့အခုတော့တကယ်ဝယ်အားပေးသွားပါပြီ ” ဟိဟိ ” နောက်လဲအားပေးနော်မဆောင်းကျေးဇူးပါစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပါစေ ” အာဘွား Ma Ma Saungဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် mmlobby Photo crd to ownerContinue Reading
နာမည်ကြီး brand အိတ်ကို Giveaway ပေးပြီးပရိတ်သတ်ရဲ့အချစ်တွေကိုပြန်လည်ရယူနေတဲ့Nay Chi Oo
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်တို့ရေ Beauty by NayChi page ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် Beauty Blogger နေခြည်ဦး ဟာ သူရဲ့ fan တွေဖြစ်တဲ့ Chillies တွေကို နာမည်ကြီး brand အိတ်ကြီးကို Give Away ပေးတဲ့ သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် သိမ်းထားတာကြာပြီမို့လို့ တစ်ကယ်တန်ဖိုးထားပြီး အသုံးဝင်မယ့်သူကို ပေးချင်ပါတယ်လို့လဲ ရေးထားပါသေးတယ် mmlobby Photo crdContinue Reading
အမျိုးသမီးတိုင်း မဖြစ်မနေသိထားသင့်သော သားအိမ်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသမီးများသားအိမ်အလုံးတည်ခြင်း (uterine fibroid) ဒီနေ့မှာ prettyတို့အတွက် အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြစ်များစိုးရိမ်းရတဲ့ သားအိမ် အလုံးတည်ခြင်းအကြောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ၂၀% ကနေ ၅၀% လောက်က အမျိုးသမီးဟော်မုန်းအက်စတိုဂျင် (Estrogen) နှင့် ပရိုဂျက်စတီရုန်း (Progesterone) တွေက သားအိမ်ကြွက်သားဖွံဖြိုးမှုကို လှုံ့ ဆော်တာကြောင့် သားအိမ်အလုံးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။တော်တော်များများ အလုံးတွေက သူ့ဘာသာသူ ရှုံ့ သွားတာမျိုးလည်း ရှိ တတ်ပါတယ်။ရှုံ့သွားပြီးပျောက်သွားရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမယ့် တချို့အလုံးတွေကျတော့ မသိမသာ လက္ခဏာလောက်ပဲပြတတ်ပြီး ကြီးလာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လက္ခဏာလေးတွေ ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ -ဓမ္မတာပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ကြာရှည်စွာလာနေခြင်း-ဓမ္မတာလာရာတွင် သာမန်ထက် အလွန်အမင်း များခြင်း-ဓမ္မတာမမှန်ခြင်း-ဓမ္မတာလာချိန်တွင်း အလွန်နာကျင်ခြင်း-တင်ပဆုံတွင်နာခြင်း နောက်ကျောနာခြင်း-ဗိုက်ပူလာခြင်း ဒီသားအိမ်လုံး၊သားအိမ်အကျိတ်(ခေါ်)သားအိမ်ရေအိတ်ဟာ တစ်လုံး(သို့မဟုတ်)တစ်လုံးထက်ပိုပြီး ၃/၄ လုံးအထက် ဖြစ်တည်နေတတ်ပါတယ်။အလုံးအသေးလေးကနေပြီး အလုံးအကြီးကြီးထိ့ ဖြစ်တည်လာနိုင်သလိုContinue Reading
DJ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပါရမီပါလာတာကြောင့်မသင်ဘဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်
MMLobby ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပရိတ်သတ်တို့ရဲ့အချစ်တော် သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်ဟာ ” DJ Sai ” ဆိုတဲ့ အမည်လေးနဲ့ DJ တီးနေပြီဖြစ်ပါတယ် သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ဟာ သရုပ်ဆောင်ပိုင်း အဆိုပိုင်းမှာသာ မက Dj ပိုင်းမှာပါ စိတ်ဝင်စားတာကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ ညီမလေးကို DJ စက်ဝယ်ခိုင်းပြီး စမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ပါရမီပါတာကြောင့် မသင်ရဘဲ တန်း တီးတတ်သွားတယ်လို့ ပြောထားပါတယ် ။ သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ဟာအခု နောက်ပိုင်း ပွဲတွေလဲ လက်ခံပြီးတီးလာရတဲ့အခါ “အရမ်းကြိုက်တယ်” လို့ချီးကျူးခံရမှုများရှိသလို “လိုင်းပြောင်းတာ” ဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်း ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဝေဖန်ကြတဲ့သူများကိုလည်း “အနုပညာသမားတစ်ယောက်ဟာ တခြားအနုပညာတစ်ခုကို လှမ်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလား ” ဆိုပြီးလည်း interview တစ်ခုမှာContinue Reading
photoရိုက်ရင်ဘယ်လိုနေရမှန်းမသိတဲ့Cuttie လေးများအတွက် Pose ပေးနည်း
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်တို့ရေ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်း နီးပါး ဝါသနာပါတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုပါနော် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လက်၂ချောင်းပဲ အမြဲထောင်တတ်တဲ့ အချစ်လေးတို့အတွက် pose ဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတဲ့ pose ပေးနည်းလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် နော် 😍 အမြဲတမ်း လက်၂ချောင်းထောင်ပြီး selfie ဆွဲမနေဘဲ pose ပေးနည်းလေးတွေ လေ့လာပြီး လှလှလေး ရိုက်ကြရအောင် 🤩 ကဲ ဒီလောက်ဆို ဘယ်လို pose ပေးရမလဲ သိပြီပေါ့နော် 🤩 သတင်းအစုံအလင်နဲ့ ဗဟုသုတများ စဉ်ဆက်မပြတ်ရယူနိုင်ဖို့ Follow လုပ်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော် mmlobby Photo crd to ownerContinue Reading
မဟာမြတ်မုနိဘုရားသမိုင်း(မန္တလေး) မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးသည် ရခိုင်လူမျိုးတို့ သမိုင်း မှတ်တမ်းအားလုံး၏ ကိုးကားချက်ဖြစ်သည်။ ထိုသမိုင်းမှတ်တမ်းများအရ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ရှိခဲ့ပြီးနောက် မျက်မှောက်ထုံးတမ်းစဉ်လာများကို ထည့်သွင်းထားရှိခဲ့သည်။ သီရိလင်္ကာ၏ ပါဠိစာပေမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆင်းသက်ကြီးထွားလာမှုရှိပြီး ပုဂံ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ကိုးကွယ်မှု ဘာသာအယူဝါဒ အဆင့်ဆင့်ထိ ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါသည်။ စန္ဒသူရိယ ဘုရင်မင်းမြတ် ရခိုင်ပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်အချိန်အခါက ဗုဒ္ဓရုပ်ထုတော်ကို သွန်းလုပ်ခဲ့သည်ဟု ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာယုံကြည်မှု ထားရှိခဲ့သည်။ စန္ဒသူရိယဘုရင်မင်းမြတ် သည် ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားပြသမှုတို့၏ သတင်းကို ကြားသိရပြီး ဗုဒ္ဓကို ရိုသေကိုးကွယ်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြလာသည်ဟု အဆိုရှိလေသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သာ၀တ္ထိပြည်တွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူသော ဂေါတမမြတ်ဗုဒ္ဓသည် ထိုအကြောင်းအရာကို သိရှိလာသောကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓက သူ၏တပည့်သာ၀က တစ်ပါးဖြစ်သော အရှင်အာနန္ဒာအားContinue Reading
အမျိုးသားထုကြီးရဲ့အချစ်တော် Model နန်းမွေစံ ပတ်စ်ပို့ အသိမ်းခံရ
မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိတ်သတ်တို့ရေ… တစ်တစ်ခေါက် တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ ယောက်ျားလေးပရိတ်သတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ Sexy Model နန်းမွေစံ ရဲ့ ပတ်စ်ပို့သိမ်းခံရခြင်းကြောင့် ဘန်ကောင်ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် မော်ဒယ်နန်းမွေစံဟာဆိုရင် Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာ Follower 270,000 ကျော် Instagram မှာ Follower 610,000 ကျော် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ။ နန်းမွေစံဟာ ရန်ကုန်မြို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးမှာ သက်တမ်းသွားတိုးစဉ် ပက်စ်ပို့ စာအုပ်သိမ်းဆည်း ခံခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် သူ့ရဲ့ ဘန်ကောက်ခရီးစဉ်ကိုလဲဖျက်သိမ်း ခဲ့ရပါတယ် ။ နန်းမွေစံဟာ သူ့ဖခင်ကျန်းမာရေးကြောင့် ဘန်ကောက်မှာသွားရောက်ကုသရန် ပတ်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးစဉ်မှာ ခုလိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာ ဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့ Twitter အကောင့်မှာလည်း မျှဝေထားတာ တွေ့ရပါတယ် ။ နန်းမွေစံဟာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးContinue Reading
ဒူးရင်းသီးအရူးအမူးကြိုက်သူများအတွက် Durian Pillow လုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိတ်သတ်တို့ရေဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ရာသီပေါ်အသီးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဒူးရင်းသီးကိုမှ အရူးအမူး ကြိုက်တတ်သူများအတွက်ဒူးရင်း pillow လုပ်နည်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် အတူတူလုပ်စားကြည့်ကြရအောင်နော် ဒီ ဒူးရင်း Pillow လေးကို ကိုယ့်အိမ်မှာ Non Stick ဒယ်ပြားလေးရှိရုံနဲ့ အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းလေးကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်လုပ်နည်းလေးက တကယ်ကို အရမ်းလွယ်ပါတယ် အခုဆိုရင်ဒူးရင်းသီးလေးတွေလည်း ပေါနေပြီဆိုတော့ ပို အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ဂျုံမှုန့် ၁၆၀ ဂရမ်နွားနို့ ၃၅၀ ဂရမ်ထောပက် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းကြက်ဥ ၂ လုံးဆားအနည်းငယ်သကြားDairy Cream (၃၀၀ ဂရမ်)အသားနွင်ထားသော ဒူးရင်းသီး ပထမဆုံး ဂျုံမှုန့်ကို ဇကာနဲ့ စစ်ပြီး ဇလုံထဲကို ထည့်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ကြက်ဥ၊Continue Reading
မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိတ်သတ်တို့ရေ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကြည့်မိလိုက်တာနဲ့ သင့်ကိုမပြုံးဘဲမနေနိုင်စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့် တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ လျှပ်တစ်ပြက် အမူအယာလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် အတူတူပြုံးရယ်လိုက်ကြရအောင် မျောက်လေး ရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုကြည့်ပါဦး 2.တစ်နေ့တစ်နေ့ချောလာတာ စိတ်ညစ်လာပြီကွာ 3. ဒို့လောက်လှအောင်ပြုံးတတ်လား ?? 4.ရှေ့ဆက်မတိုးလာနဲ့နော် ဟျောင့် 5. အား … အမေရေ 6. နှဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားလိုက်ရင် ငါလေရင်မောတယ် 7. လေဆာနဲ့တိုက်ထားတာလေ လှလား ?? သတင်းအစုံအလင်နဲ့ ဗဟုသုတများ စဉ်ဆက်မပြတ်ရယူဖို့ Follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် mmlobby Photo crd to ownerContinue Reading
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်တို့ရေ ဒီကနေ့မှာတော့ စားပြီးတိုင်းလွှင့်ပစ်နေကျ လိမ္မော်သီးအခွံလေးတွေရဲ့ ဒူးနာပျောက်စေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသမီးများ အသက် လေးဆယ်ကျော်၊ ငါးဆယ် ဆိုလျှင် ဒူးနာရောဂါက ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ အသက် ခြောက်ဆယ်၊ ခုနှစ်ဆယ် ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်တတ်ပြီး ဝ သော အမျိုးသမီးများဖို့ ပိုဆိုးပါတယ် ။ အပေါ်ပိုင်း ဝိတ်က ကြီးသည့်အတွက် ဒူးက ခံနိုင်ရည် မရှိပါဘူး အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာတဲ့အခါ ဒူးက အဆီခမ်းသည် လို့လည်း ပြောကြပါတယ် အချို့မှာ သိပ်မဝသော်ငြားလည်း အသက် ခြောက်ဆယ်ဝန်းကျင်အရွယ်ကတည်းက ဒူး နာလာပါတယ် အင်္ဂလိပ်ဆေးများ အမျိုးမျိုး သောက်ကြည့်သော်လည်း သက်သာလာခြင်း မရှိ သမားတော်က ပေးသည့်Continue Reading